Nzuzo - Buddhatrends
Ụkpụrụ Nzuzo Buddhatrends
Nzuzo Nzuzo a na-akọwa otua esi achota ozi nkeonwe gị, jiri, ma keta mgbe ị gara ma ọ bụ mee ka ịzụta si www.buddhatrends.com ("Site").
Ọzọkwa, mgbe ị na-azụ ma ọ bụ gbalịa ịzụta site n'Ịntanet, anyị na-anakọta ụfọdụ ozi sitere n'aka gị, gụnyere aha gị, adreesị ịgba ụgwọ, adreesị mbupu, ozi ịkwụ ụgwọ gụnyere nọmba kaadị akwụmụgwọ, adreesị ozi-e, na nọmba ekwentị. Anyị na-ezo aka na ozi a dị ka "Ozi Ozi".
- Chekwaa iwu anyị maka ihe ize ndụ ma ọ bụ wayo;
N'ikpeazụ, anyị nwekwara ike ịkekọrịta Ozi Nkeonwe gị iji kwenye na iwu na iwu ndị dị, iji zaghachi na ntinye akwụkwọ, akwụkwọ ọchụchọ ma ọ bụ arịrịọ ndị ọzọ gbasara iwu maka ozi anyị natara, ma ọ bụ iji chebe ikike anyị.
Ebumnuche abụghị saịtị maka ndị nọ n'okpuru afọ 18
Maka ozi ndị ọzọ gbasara omume nzuzo anyị, ọ bụrụ na i nwere ajụjụ, maọbụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịme mkpesa, biko kpọtụrụ anyị site na e-mail na support@buddhatrends.com ma ọ bụ site na mail site na iji nkọwa ndị dị n'okpuru: